बाबुराम ः देर आए दुरुस्त आए
बाबुराम भट्टराई निधारमा रातो टिका, दौरा सुरुवाल, कोट टोपी । अहा खुबै सुहाउने रहेछ । बाबुराम हुन् कि नेपाली बाबु ? चिन्नै पो गाह्रो भयो ।
यिनीप्रधानमन्त्री भए, चीन गएर फर्कदा नेपाल आधा उत्तर, आधा दक्षिणतिर मर्ज हुनसक्छ भन्ने बयान दिए र पछि सुधारे । एयरपोर्टमा भारतीयहरुलाई सहुलियत दिने, आवत जावतको रेकर्डको जिम्मा समेत भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने यिनै हुन् । त्यसो भनिरहदा बाबुराम गोरखाका हुन् कि गोरखपुरका छुट्याउन मुस्किल परेको थियो । त्यसो त जेएनयुका विद्यार्थी भएकाले यिनको लगाव दिल्लीतिर हुनु बुझ्न सहजै सकिन्छ ।
मेची महाकाली जनसंवाद यात्रा गरिरहेका बाबुराम भट्टराई देश अनुसारको भेष भन्दै कतै लिम्बुभेष, कतै तमु भेष, कतै मगरात भेष त खस प्रदेश पुग्दा खस भेष लगाएको तर्क गरिरहेका छन् । उनकी पत्नी हिसिला यमी यसै भनिछन् ।
जाजरकोट पुग्दा डा.बाबुराम भट्टारई नयाँ शक्ति पार्टीको उत्पादन तथा रोजगार विभागका प्रमुख भक्तबहादुर शाहको खेतीमा पुगे, यसैगरी नेपाली बाबु बनेर पुगे । उनले थरि थरिका फोटो शेसन समेत गरेका छन् । यो लवाइमा डा. बाबुरामले भनेका छन्– अरु गर्छन् कुरा, हामी गर्छौं पूरा । उनका अनुसार उनलाई चुनावी नाराको सम्झना आयो रे ।
अरु पार्टीहरुले पनि डा.बाबुराम भट्टराईबाट सिके राम्रो हुनेछ । खासगरी प्रचण्डजीले बाबुरामबाट सिक्ने कुरा राष्ट्रिय पोसाक बारेमा हो । राष्ट्रिय पोसाकमा बाबुरामको व्यक्तित्व निकै उजेलिएको छ । प्रचण्डजी, सुटमाथि टोपी लगाउँछन्, यसरी दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएको उनको कुनै फोटो छैन ।
अहिले पनि प्रचण्डजी क्रान्तिका कुरा गर्छन् । अर्को माओवादी जन्मिन्छ भनेर भय सिर्जना गर्नमा व्यस्त छन् । खासगरी जनयुद्धकालका मुद्दामा फसिन्छ कि भन्ने भय छ प्रचण्डलाई । माओले सांस्कृतिक क्रान्तिपछि जनताका सामु घुँडा टेकेर माफी मागेका थिए । प्रचण्डले त्यसरी माफी माग्नुपर्छ र सजायका लागि तैयार हुनुपर्छ । जनयुद्धकालमा उनले गर्नु नगर्नु गल्तीहरु गरेका छन् । दण्ड त पाउनैपर्छ । हो, जनताले माफी दिनसक्छन् । तर विश्वलाई नेपाल बिधिमा चल्ने मुलुक हो, फौजदारी अभियोगमा पीडकले दण्ड र पीडितले न्याय पाउँछ भनेर देखाउनका लागि समेत नेकपाको काँधमा बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको यथोचित सम्मान गर्न साह्रै जरुरी देखिन्छ ।